Barnstable Co. Waxay u Dabaaldegtaa 25 Sano oo Qabyaalad ah
Barnstable County, Massachusetts, barnaamijka daadinta ayaa dhawaan u dabaal degay sanad guuradii 25aad. Degmada, oo leh oo ka shaqeysa saddex Ellicott® sumadda gooyo gooynta, ayaa meesha ka saartay ku dhawaad ​​2.4 milyan oo yaardi cubic oo walxo ah inta lagu guda jiro in ka badan 300 mashruuc oo qodis ah.
Muddo rubuc qarni ah, barnaamijku waxa uu marin-biyoodka ka dhigayay kana soo baxaya gacanka si fudud loogu maro maraakiibta kalluumaysiga, iyada oo 95% walxaha la jeexjeexay ay gacan ka geysanayaan soo celinta xeebaha jasiiradda.
Sannadkii hore ayaa ahaa kii ugu guusha badnaa ilaa hadda, iyadoo ku dhawaad ​​150,000 yards cubic laga saaray mashaariicda Barnstable, Yarmouth, Falmouth, Bourne, Provincetown, Truro, Dennis, Mashpee, Chatham, iyo Harwich. Ted Keon, oo ah maamulaha Khayraadka Xeebta ee magaalada Chatham, ayaa sheegay in bulshooyinka baddu ay ku tiirsan yihiin marin biyood oo ammaan ah oo la isku halayn karo.
"Kooxaha kalluumeysiga ee Chatham waa qayb muhiim u ah dhaqaalaha magaalada iyo gobolka oo dhan," ayuu yiri Ted Keon, oo ah maamulaha kheyraadka xeebaha ee magaalada Chatham. "Taageerida mashaariicda qodista waxay leedahay soo celin dhaqaale oo muhiim ah."
Dredge "SAND SHIFTER" gudaha Eeddada Lydia's Cove, Chatham. Ken Cirillo
Markii barnaamijka la bilaabay 25 sano ka hor, shaqadii ugu horeysay ee Codfish-ka degmada ee asalka ah ee deegaanka - waxay ahayd Truro. Codfishku wuxuu soo noqdaa ku dhawaad ​​sannad kasta si uu kanaalka u furo. Marka lagu daro Codfish, oo hadda loo isticmaalo xoojiye ahaan, degmadu waxay leedahay Sand Shifter iyo Codfish II, oo la iibsaday 2019.
Daraasad ay samaysay Qaybta Massachusetts ee Kalluumaysiga Badda, Isbahaysiga Kaluumaysatada, iyo UMass Boston's Urban Harbors Institute, ayaa muujisay in daadinta ay tahay welwelka ugu sarreeya ee ku dhawaad ​​​​deked kasta oo gobolka ah.
Seth Rolbein, oo hogaaminayey dadaalka astaanta dekedaha ee Isbahaysiga Kaluumaysatada ayaa yidhi "Shaqada xadhkaha goosadka ee degmadu waxay lama huraan u tahay ilaalinta jidadkeena iyo jidadkeena. "Caafimaadka dhaqaale ee Cape wuxuu ku xiran yahay in la helo wadooyin la isku halleyn karo oo badda."